I-Semalt Expert: Indlela Yokunqumla Ugaxekile Ugaxekile Ngee-Google Analytics Filters
Amashishini ase-Intanethi afuna ukuveliswa kwezithuthi kunye nokuguqulwa kwamananikuphila kwi marike. Kule meko, i-analytics inendima enkulu ekufumaneni i-high-value traffic kunye nokuguqulwa kwamanani. Amashishiningenjongo yodwa yokuvelisa izithuthi kwiwebhusayithi yabo kufuneka ibe nomlinganiselo wokutyekela ukuba yintoni i-traffic eguquka ngayoizinga eliphezulu. Ininzi, amashishini avelisa umxholo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye neenkcukacha. Isizukulwana somxholo omtsha kunye nesisisekosoloko esomeleza xa kufike ekuthengiseni okuqukethwe.
Iingxaki zifika xa kuthunyelwa ugaxekile, isicatshulwa se-analytics esitshintsha ikhoyoIdata ithatha ukuthengisa. Ugaxekile logalelo lusebenza ukwenza utshintsho lwechcukacha ngokuchithwa ngamanani obhalisiweyo, mhlawumbizendlela - computer repair Palo Alto. Ngenhlanhla, i-Google inokubakho ukuqinisekisa ukuba amashishini azama ukuphumelela kwi-intanethi ahluleki.
Ukhangele phambili ekubeni neenkcukacha ezichanekileyo kwiFirm B2B neB2C? UMichael Brown, iSemalt Umphathi Wempumelelo yoMthengi, unikezela ngengqalelo isikhokelo esiza kukunceda ukuba ungadluli ngaphandle kokuhlangabezana naluphi na iingxaki.
Ukuthathwa kweReferrer kwi-spam yokudlulisa
Kubaqalayo abadinga iisiseko, umthumeleli yiwebhusayithi ephumelele xaisivakashi sisuka kwikhasi lewebhu lewebhu ukuya kwelinye. Ukuba isivakalisi siza kucofa iqhosha eliye lagqitywa kwinqaku elithile, ikhonkco iya kuthizichazwe kwi-Google Analytics njengomthombo wokuthumela. Imithombo yokudluliselwa ngokubanzi isetyenziselwa ukuvelisa ulwazi malunga nokuba luncedo kangakanani umnxibelelwanokwiwebhusayithi yezoshishino..
Ulwazi malunga nokuthunyelwa kogaxekile
I-spam yokudlulisa phambili ibalulekileyo kwiintlobo ezimbini ezibandakanya:
Uthungelwano logalelo logalelo
Oku kuyindlela yokudlulisela inkohliso ejongene nokukhohlisa. Ugaxekile usebenzaukufakela umthumeli kwaye unike igama elifanelekileyo ukudala i-traffic kunye nokubonisa ingxelo yakho ye-Google Analytics. I-spam yokudlulisa i-spam iyaqhubekathumela iikhonkco kwindawo yakho ukuqokelela ezinye izithuthi. Nangona kunjalo, igama elisetyenziselwa ukuthunyelwa kogaxekile luhlala lukhohlakele kwaye lungafanelekanga njengoko kwenzekaumoya wokudlulisa ugaxekile.
Umoya wokudlulisa umoya
I-spam yokudlulisa i-spam iqhutyelwa kakhulu ngumthengisi wedijithali ongekho mthethweniInjongo yokukhuthaza iphepha elithile.
Ukukhusela i-spam yokudlulisa usebenzisa i-Google Analytics
I-Google Analytics isebenza ukukhusela zombini umgcini kunye nomoya wokudlulisa ugaxekile kuninzingendlela efanelekileyo. Ukufumana uluhlu lwazo zonke i-spam yokuhambisa, iya kwi-Google Analytics uze uklikhethe ithebhu yokubika. Khetha ixesha elikhoyoufuna kwaye ukhethe abaphulaphuli, kwaye ukwandise ukhetho lwenethiwekhi. Hamba nge-hostnames uze uqokelele onke amagama angabikho. Yakhaibonakaliso rhoqo eza kucoca zonke iifayile ezingabonakaliyo kunye nokuhanjiswa kwiGoogle Analytics.
Abadayisi beDijarha banokuvimba ukugalelwa kogaxekile usebenzisa umthombo wenkampu. Yi leayikho kuphela into enokuthenjwa yokuvimba ukugalelwa kogaxekile kodwa ulula. Kulo khetho, omnye akenzi isihlungi segama lomncedisi, kodwa kunokoumthombo wephulo. Yiba nephulo elifanelekileyo kwiwebhusayithi yakho ngokujongana neengongelo ezinobungozi kunye nokuthunyelwa kogaxekile ngokufanelekileyo.